अफशोर बैंक खाता सेटअप प्रक्रिया
अफशोर खाता सेटअप - के गर्ने
तपाइँको स्थापनाको पहिलो चरण अपतटीय बैंक खाता एक अनुभवी पेशेवर संग आफ्नो आवश्यकताहरु छलफल गर्न हो। तपाईं यो टेलिफोन वा अनलाइन मार्फत गर्न सक्नुहुनेछ। विशेष रूपमा तपाई यस पृष्ठमा नम्बर वा फारम प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ परामर्शदातासँग सीधा संचारको लागि।
त्यस्तै रूपमा, हामी तपाईंलाई प्रसिद्ध क्षेत्र मा एक बैंक खाता सेट अप गर्न आवश्यक जानकारी कभर गर्न सक्छौं। हाम्रो पेशेवरहरूको टोलीले लगभग कुनै पनि देशमा नयाँ बैंक खाता खोल्न सहयोग प्रदान गर्न सक्छ।
यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि अधिकतर अफशोर बैंकहरूलाई एक योग्य परिचयकर्ताको आवश्यक पर्दछ। त्यो त्यस्तो व्यक्ति हो जससँग पहिले नै बैंकसँग सम्बन्ध छ। भाग्यवस, यो संगठन विश्वव्यापी धेरै वित्तीय संस्थानहरूको लागि एक योग्य परिचय हो।
एउटा विदेशी बैंक खाताले एउटा क्षेत्राधिकार क्षेत्रमा बैंक खातालाई जनाउँछ जहाँ हस्ताक्षरकर्ता वा खाता लाभकर्ता नागरिक वा निवासी हुँदैन। हामी सामान्यतया यी क्षेत्रहरू ग्राहक गोपनीयताको कडा कार्यान्वयनको कारण बैंकिंग हेभन्स को रूपमा उल्लेख गर्दछौं। जब तपाईं यी अनुकूल विदेशी क्षेत्रहरूमा कुनै एउटा अपतटीय बैंक खाता खोल्नुहुन्छ, तपाईं वित्तीय गोपनीयताको महत्वपूर्ण प्राप्त गर्नुहुन्छ।
त्यसोभए, तपाइँ कसरी गोपनीयता अधिकतम गर्नुहुन्छ? छोटकरीमा, हाम्रा ग्राहकहरु प्राय: निजी अफशोर कम्पनीहरूको नाममा हामीले स्थापना गरेका नयाँ खाताहरू खोल्दछन्। विदेशी बैंक खाता खोल्ने प्राथमिक कारणहरू गोपनीयता र सम्पत्ति सुरक्षा हुन्। त्यहाँ अतिरिक्त लाभहरू छन् जस्तै सम्पत्ती योजनाको साथै अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र व्यवसाय। यी सुविधाहरूलाई प्राय: उचित कानूनी कानुनी उपकरणको आवश्यकता पर्दछ जस्तै एक अपतटीय LLC। गोपनीयता र सम्पत्ति सुरक्षा खोज्नेहरूको लागि सबैभन्दा लोकप्रिय र लाभदायक हो नेविस एलएलसी.
कसरी एउटा विदेशी बैंक खाता खोल्ने
खाता खोल्दा मोट विदेशी बैंकहरूको समान आवश्यकताहरू हुन्छन्। बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालना गर्न त्यसो गर्छन्। यसले तपाईंको बारेमा जानकारी, पहिचान र प्रारम्भिक जम्मा समावेश गर्दछ। तपाईंको वित्तीय संस्थामा निर्भर गर्दै, बैंकले तपाईंलाई तपाईंको राहदानी, सन्दर्भ र निवास प्रमाणको प्रतिलिपिहरू सोध्न सक्छ। हामी विश्वको सब भन्दा बलियो विदेशी बैंकहरूको लागि ढोका खोल्न सक्षम छौं। क्षेत्र मा विशाल अनुभव र दीर्घायु को कारण, हामी स्विजरल्याण्डको धेरै ठूला र सब भन्दा बलियो बैंकहरूमा योग्य परिचयकर्ताहरू हौं।
पहिले, तपाइँ एक विदेशी कम्पनी गठन। त्यसो भए तपाई ब्यापिको नाममा बैंक खाता खोल्नुहुन्छ। यसले तपाईंको अफशोर बैंक खाता निजी अफशोर कम्पनीको नाममा खोल्छ तपाईंको व्यक्तिगत नामको सट्टामा। जब तपाईंसँग सिधै तपाईंको नाममा सम्पत्ति हुन्छन्, तिनीहरू मुद्दाको लागि सजिलो लक्ष्यहरू हुन्छन्।
थप रूपमा, जब तपाईं दुई विदेशी क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईं बढि वित्तीय गोपनीयता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ एक देश मा तपाइँको कम्पनी गठन। त्यसो भए तपाईले अर्कोमा आफ्नो बैंक खाता खोल्नुहोस्। अनिवार्य रूपमा, तपाईले दुई फरक फरक देशको गोपनीयता कानूनको फाइदा लिइरहनुभएको छ। अनुकूल अपतटीय बैंकिंग क्षेत्र मा, यो एक गम्भीर अपराध हो अरुलाई ग्राहक खाता जानकारी प्रदान गर्न। अन्य क्षेत्रहरु मा यो तपाइँको कम्पनी को स्वामित्व को बारे मा जानकारी प्रदान गर्न को लागी एक अपराध हो। कम्पनी प्लस बैंक खाता संयोजन तपाइँको सम्पत्ती आँखाबाट बचाउनको लागि सब भन्दा द्रुत तरीका हो। थप जानकारीको लागि, पढ्नुहोस्, अफशोर बैंकिंग शुरुआत गाइड, जहाँ तपाईं अफशोर बैंकिंग मा आधारभूत जानकारी देख्नुहुनेछ।
अफशोर बैंकिंग कारण परिश्रम
वित्तीय सेवा आयोग (FSC) वा त्यो देश वा क्षेत्र मा बराबर निकाय प्रत्येक बैंक नियमन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी), यूरोपियन युनियन र अन्य संस्थाहरूले सिफारिस र आवश्यकताहरू राखे। तिनीहरू लागू गर्न विभिन्न FSC हरूको लागि र बैंकहरू पछ्याउन छन्।
यी नियमहरूको मुख्य कारण कानून पालना गर्ने नागरिकहरू र अपराधीहरूलाई वित्तीय प्रणालीबाट टाढा राख्नु हो। त्यसकारण त्यहाँ मनी लान्ड्रिंग वा अन्य अवैध गतिविधिहरूलाई रोक्नको लागि कडा आवश्यकताहरू छन्।
यहाँ विचार गर्दा सामान्य चीजहरू प्राय: आवश्यक हुन्छन् अपतटीय बैंकिंग। बैंकले यस जानकारीलाई "उचित परिश्रम" वा "तपाइँको ग्राहकलाई चिन्नुहोस्" वा KYC आवश्यकताहरू पूरा गर्दै भन्छ।
के बैंकहरू चाहिन्छ
यहाँ केहि आईटमहरूको उदाहरण हो जुन आवश्यक छ कानुन.
१. बैंक खाता आवेदन।
२. हस्ताक्षर कार्ड
Passport. पासपोर्टको नोटरी गरिएको प्रतिलिपि
Address. ठेगानाको प्रमाण, जस्तै उपयोगिता बिल
Relevant. प्रासंगिक व्यक्तिले कम्तिमा दुई बर्षको लागि बैंकिंग सम्बन्ध भएको बैंकबाट बैंक सन्दर्भ पत्र
Account. लेखाकार / अटर्नीबाट पेशेवर सन्दर्भ पत्र जससँग प्रासंगिक व्यक्तिले कम्तिमा दुई वर्षको लागि व्यावसायिक सम्बन्ध रहेको छ
यो कुनै पनि हिसाबले पूर्ण सूची होईन। FSC र OECD र बैंक, आफैं को अतिरिक्त आवश्यकताहरु हुन सक्छ। फेरि, यो सबै बैंकिंग प्रणालीको अखण्डता र वैधता कायम गर्न र अपराध रोक्न मद्दतको लागि हो। बैंक अधिकारीहरूले कागजात राम्ररी जाँच गर्नेछन् र तपाईंलाई मान्य सन्दर्भ प्रदान गर्नका लागि टेलिफोन कलहरू गर्दछ।
उदाहरण को लागी, तिनीहरु तपाइँको शारीरिक निवास प्रमाणित गर्न चाहानुहुन्छ। त्यसो भए तपाईलाई प्रमाणको केहि प्रकार चाहिन्छ, जस्तै तपाईको नाममा युटिलिटी बिल। कुनै कागजातको प्रकृतिमा निर्भर गर्दै, नोटरीकरण आवश्यक हुन सक्छ। केहि देशहरूलाई खाता खोल्नु अघि धेरै प्रकारका पहिचानको आवश्यक पर्दछ।
जब तपाईं एक अपतटीय बैंक खाता खोल्न, तपाईं एक पेशेवर को लागी तपाईं त्यसो गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो संगठन, उदाहरण को लागी, यो सेवा प्रदान गर्दछ। अन्यथा, तपाईले प्रत्येक आधिकारिक क्षेत्र वा बैंकको जनादेश निश्चित आवश्यकताहरूको अनुसन्धान गर्न आवश्यक पर्दछ। Quora को बारे मा अनुमान 14,600 विश्व मा बैंक। त्यसोभए, जबसम्म तपाईंसँग तपाईंको हातमा धेरै समय हुँदैन, प्रायः मन्जुरी लिन्छन् अनुभवी मद्दत लिनु उत्तम हुन्छ।
सन्दर्भ र कागजात
बैंकिंग सन्दर्भहरूको रूपमा, अफशोर बैंकले तपाईं र तपाईंको बैंक बीच सन्तोषजनक सम्बन्धको प्रमाण चाहन्छ। यसले दैनिक ब्यालेन्स जस्ता जानकारी लिन सक्छ। धेरै जसो उदाहरणहरूमा, छ महिना देखि एक बर्षको बैंक स्टेटमेन्टको मूल्य पर्याप्त हुनुपर्दछ। तपाइँको घरेलु बैंकले सामान्यतया सन्दर्भ पत्र पनि प्रदान गर्न सक्छ कि तपाइँ राम्रो स्थितिमा ग्राहक हुनुहुन्छ भनेर पुष्टि गर्दछ।
अपतटीय बैंकले प्रकृति र लेनदेन को प्रकार को बारे मा जानकारी लिन सक्छ तपाइँ को लागी योजना को लागी। मनी लान्ड्रिंग र अन्य अवैध गतिविधिहरू रोक्न बैंकहरू बढ्दो दवावमा थिए। त्यसकारण, यो थप कागजात अनुरोध गरिएको छ ताकि संस्थाले खातामा कोष स्रोतहरू नोट गर्न सक्दछ। यदि तिनीहरूले त्यसो गरेनन भने, तिनीहरूले जरिवाना तिर्न सक्छन् वा उनीहरूको बैंकिंग इजाजतपत्र गुमाउन सक्छन। त्यसोभए, उनीहरूले तपाईंको लागि विशेष अपवाद बनाउने आशा नगर्नुहोस्।
के अंग्रेजी तपाईको अफशोर बैंक खाता खोल्ने योजनामा ​​रहेको देशको आधिकारिक भाषा हो? यदि यो होईन भने, तपाईंले आधिकारिक भाषामा तपाईंको कागजातहरूको प्रमाणित अनुवाद प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, अफशोर बैंक खाता सेटअप प्रक्रिया घरेलु खाता खोल्ने भन्दा फरक छ। धेरै जसो बैंकहरूले तपाईंलाई व्यक्तिगत रूपमा देखाउन आवश्यक गर्दछ। भाग्यवस, हामी जान्दैनौं कि केहि छैन। जो यात्रा को आवश्यकता छैन, को लागी अतिरिक्त कागजात आवश्यक हुन्छ कि प्रमाणित गर्न को लागी तपाईं को हो तपाईं हुनुहुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईंको फाइदाको लागि हो। त्यो किनभने जब तपाईं आफ्नो पैसा माग्दै देखाउँनुहुन्छ, तपाईंलाई थाहा छ यो केवल तपाईंमा जान्छ; तिनीहरू हैन भनेर दावी गर्ने कोही होइनन्। यसैले, उचित आईडी अगाडि प्रदान गरेर, तपाइँ र बैंकले थाहा पाउनेछ कि यो वास्तवमै तपाईं हो।
प्रक्रिया र बैंक र देश फरक फरक भएकोले खाता खोल्नु अघि केही मुद्दाहरूको स्पष्टीकरण दिन महत्त्वपूर्ण छ। तपाईले जान्न चाहानुहुन्छ कि त्यहाँ ठूलो रकम स्थानान्तरण गर्न प्रतिबन्धहरु छन्। यसैले, तपाईं त्यस्ता प्राधिकरणको लागि विधिहरूको बारेमा सचेत हुन चाहनुहुन्छ। तपाईले यो जान्न चाहानुहुन्छ कि बैंकको डेबिट कार्डले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्छ कि गर्दैन। के दुबै खुद्रा खरीदको लागि र एटीएममा काम गर्दछ? पत्ता लगाउनुहोस् कि यदि तपाईं डेबिट कार्ड प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ अनलाईन वस्तुहरू र सेवाहरूको लागि भुक्तान गर्नका लागि।
धेरै अपतटीय बैंकहरूले प्रस्ताव गरेको ब्याज दरहरू कहिलेकाँही अमेरिकी बैंकहरूले प्रदान गरेको भन्दा बढी हुन्छन्। शुल्क संरचनाहरू पनि अलि बढी हुन सक्छ। परिश्रमपूर्वक काम गर्नु पर्ने अंशले बैंकले लिने सबै शुल्कहरू विचार गरिरहेको छ। यदि तपाईं धेरै स्थानान्तरणहरू बनाउने योजना गर्नुहुन्न भने शुल्कहरू धेरै फरक नहुन सक्छ; तर तिनीहरू एक धेरै सक्रिय बैंक खाता संग जोड्न सक्नुहुन्छ।
एक पटक तपाईंको खाता खुल्ला छ
संस्थाले प्रक्रिया गरे पछि तपाईको अपतटीय बैंक खाता सेटअप कागजातहरू, ती सामान्यतया ईमेल मार्फत तपाईलाई पुष्टिकरण पठाउँछन्। त्यस समयमा बैंकले तार स्थानान्तरणको लागि कुर्नेछ। एक पटक उनीहरूले प्रारम्भिक निक्षेप प्राप्त गरे पछि तिनीहरूले तपाईंको नयाँ खाता सक्रिय गर्नेछन्। केहि खर्चमा खुला शुल्क, अतिरिक्त बैंक कार्ड (यदि लागू भएमा), कुरियर र अन्य खर्चहरू सामेल छन्। फेरि, यी अपतटीय बैंक खाता प्रदायकहरू बीच भिन्न हुनेछ।
एक पटक बैंक खाता सक्रिय भएपछि तपाईले आफ्नो उपयोगकर्ता खाता र पासवर्ड बनाउन अनलाईन पहुँच प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईले आइटमहरू पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जस्तो कि प्रयोग गर्न सजिलो डिजिटल हस्ताक्षर उपकरण। जब तपाईं यसलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईं एक डिजिटल उपकरण देख्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको खाता ब्यालेन्स पहुँच गर्नका लागि सुरक्षित कोड उत्पन्न गर्दछ। धेरै जसो बैंकहरूसँग, तपाईं लेनदेनहरू छिटो, सजीलो, निजी र सुरक्षित रूपमा गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसोभए, तपाईको खाता अपरेटिंग र अनलाइन पहुँचको उपयोगले यो सडकको तल रहेको बैंकको प्रयोगको जस्तै बनाउँछ।
मद्दत यहाँ छ
OffshoreCompany.com ले अफशोर बैंक खाताहरू सेट अप गर्न विश्वव्यापी हजारौं मानिसहरूलाई मद्दत गरेको छ। थप रूपमा, हामी निजी स्टक दलाली खाताहरू स्थापना गर्न मद्दत गर्दछौं। यसबाहेक, यो संगठन एक अग्रणी कम्पनीहरू हो जसले सम्पत्ति सुरक्षा योजनाहरू प्रदान गर्दछ। यसैले हामी एक विश्वसनीय प्रदाता हौं जुन सही अपतटीय क्षेत्राधिकार संग सम्बन्ध छ। यदि तपाईं अफशोर बैंकि inमा भाग लिन चाहानुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् आफैंलाई सूचित गर्नुहोस् ताकि तपाईं सही निर्णय लिनुहुन्छ। हामी यही गर्न सक्दछौं।
विदेशी बैंक खाता लाभ
विदेशी बैंकहरूले प्राय: राम्रो ब्याज दरहरू प्रस्ताव गर्दछन् जुन अमेरिका र क्यानेडाली बैंकहरूले। थप धेरै प्रस्ताव व्यवस्थित लगानी खाता सेवाहरू। अफिसोर बैंकि toको लागि गोपनीयता थप्नु एक लाभ हो। अर्को अनुकूल विदेशी लगानीको अवसर हो। एक विदेशी बैंक खाता थप सम्पत्ति सुरक्षा उपकरण जोड्ने एक ठूलो तरीका हो आफैलाई आर्थिक रूपमा रक्षा गर्न। यदि तपाईंसँग आफ्नै नाममा मात्र एक अपतटीय खाता छ भने, तपाईं सुरक्षित हुनुहुन्न। त्यो हो, एक स्थानीय न्यायाधीशले तपाईंलाई रकम फिर्ता गर्न आदेश दिन सक्दछ। तपाइँको खातालाई एक अपतटीय LLC वा सम्पत्ति सुरक्षा ट्रस्टमा समात्दै, तथापि, टेबुलहरू बदल्छ। त्यसो गर्नाले तपाईंको विपक्षी वकिललाई तपाईंको खाता लुट्नबाट रोक्न सक्छ।
विदेशको बैंकि,, तल लाइन
एक ओभरसीज बैंक खाता भनेको सरल अर्थ हो, एक वित्तीय संस्था संग बैंकिंग तपाईंको आफ्नै बाहेक अरू कुनै देशमा आधारित। अमेरिकीहरूको लागि विदेशमा बैंकि भनेको सामान्यतया एक सुरक्षित र लोकप्रिय वित्तीय आश्रय हो। यी हेवनहरूमा स्विजरल्याण्ड, केम्यान टापु, बेलिज र लक्जमबर्ग समावेश छ। फलस्वरूप
हामीले भनेझैं विदेशमा बैंक खाता प्रयोग गर्नु तपाईंको घरेलु खाता प्रयोग गर्न मिल्दोजुल्दो छ। त्यो हो, विदेशी बैंकहरू सजिलैसँग एटीएम मेशिनहरू र अनलाईन खाता व्यवस्थापन मार्फत उपलब्ध छन्।
विदेशका खाताहरू विश्वको सबसे सुरक्षित र सब भन्दा बलियो वित्तीय संस्थासँग। अधिक जानकारीको लागि यस पृष्ठमा एउटा फोन नम्बर वा पूर्ण परामर्श फारम प्रयोग गर्नुहोस्।
बैंकिंग विदेशीहरूको फाइदाहरू
राम्रो ब्याज दरहरू
मुकदमाबाट सम्पत्ति सुरक्षा बढाइयो
आकर्षक अफशोर लगानीहरूको ढोका खोल्छ
सबैभन्दा ठूलो सल्लाह
यहाँ एक ठूलो सुझाव छ जुन तपाइँलाई वित्तीय गोपनीयता र सम्पत्ति सुरक्षा वृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ। त्यो हो, एक अफशोर कम्पनीको नाममा एक विदेशी बैंक खाता खोल्नुहोस्। यसले महत्त्वपूर्ण बृद्धि गरिएको आर्थिक गोपनीयता प्रदान गर्दछ। तपाईंको गोपनीयता बढाउने र तपाईंको सम्पत्ति सुरक्षित गर्ने थुप्रै तरिकाहरू छन्। केवल अफशोर बैंक खाताहरू, कम्पनीहरू र न्यासाहरू संयोजन गर्नुहोस्। उदाहरण को लागी, नेविस LLC विधानहरु को लागी कुनै पनि LLC को सब भन्दा कडा सम्पत्ति सुरक्षा प्रदान गर्दछ। यसबाहेक, केस कानून कुनै पनि प्रकारको सबैभन्दा प्रभावी अपतटीय सम्पत्ति सुरक्षा उपकरणको रूपमा कुक टापु ट्रस्टलाई औंल्याउँछ।
तपाईंलाई थाहा छ, तपाईंको धन र वित्तीय गोपनीयतालाई सुरक्षित गर्नु पहिले कहिल्यै महत्त्वपूर्ण भएको थिएन। भाग्यवस, तपाईं सुरक्षित अपतटीय क्षेत्र मा व्यापक गोपनीयता र सम्पत्ति सुरक्षा वाहनहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ। हामी जस्तो प्रदायकहरूले हजारौं अफशोर कम्पनीहरू र आफ्ना ग्राहकहरूको लागि ट्रस्टहरू प्रत्येक दिन गठन गर्दछन्। तिनीहरूका नयाँ मालिकहरू, बारीमा, प्रत्येक वर्ष लाखौं डलर विदेशी बैंक खातामा जम्मा गर्छन्। स्विजरल्याण्डको सबल बैंकहरूको लागि योग्य परिचयकर्ताको रूपमा यस संस्थाले अन्य हजारौंलाई अपतटीय बैंकि withको साथ सहयोग गरेको छ। त्यो हो, यस संगठनले उनीहरूलाई विदेशी बैंक खाता खोल्न मद्दत गर्दछ। त्यस्तै रूपमा, तपाईं तिनीहरूलाई कम प्रारम्भिक निक्षेपहरूको साथ खोल्न सक्नुहुन्छ जब एक अनुभवी पेशेवरले बाटोमा डो leads्याउँछ।
यो आईआरएस विश्वव्यापी आम्दानीमा अमेरिकी मानिसहरूलाई करहरू। त्यसोभए, निश्चित हुनुहोस् कि तपाईं सीपीएको निर्देशन खोज्नुहुन्छ जसले तपाईंलाई ध्वनी कर सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। तपाईं सम्पत्तिहरू बचाउन कानुनी तरिका खोज्दै हुनुहुन्छ? के तपाई नैतिक र कानुनी रूपमा अनुरूप फेशनमा अपरेट गर्दै हुनुहुन्छ? यदि हो भने, यस पृष्ठमा प्रदान गरिएको नम्बर वा फारम प्रयोग गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
कानूनी उद्देश्यहरू मात्र
माथिको सहमतिले भनेको छ कि कम्पनी र बैंक खाता कानुनी उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गरिन्छ। सामान्यतया, अमेरिकी मानिसहरूलाई विश्वव्यापी आम्दानीमा कर लगाइन्छ। त्यसो भए, व्यर्थबाट सम्पत्ति संरक्षण, व्याकुल अभियोगहरु धेरै जसो अवस्थामा स्वीकार्य हुन्छ। यद्यपि, कर चोरी वा माथिको प्रयोग अवैध रूपमा प्राप्त रकमहरू जोगाउन यो लेखको उद्देश्य होईन। त्यसो भए, हामी मानिलिन्छौं कि तपाईं नैतिक आशयसहित कानून-कानून पालन गर्ने नागरिक हुनुहुन्छ। यदि हो भने, माथिको सेवाहरूको उपयोगले वित्तीय गोपनीयता र सम्पत्ति सुरक्षा प्रदान गर्न सक्दछ जुन तपाइँ खोजी गर्दै हुनुहुन्छ।
अन्तिम अपडेट अक्टुबर १ 1, २०२० मा भयो